चापागाउँबासीलाई सम्झौतामै सुताइयो, थप ७ महिना धुलो र हिलो खुवाउने
by Krishna KC | Updated: 16 May 2019
-चापागाउँबासीलाई सम्झौतामै सुताइयो, थप ७ महिना धुलो र हिलो खुवाउने
आम सरोकार/ललितपुर/२ जेठ,
वैशाख २६ गतेदेखि बन्द भएको चापागाउँ सडकको बन्द नेतहरुको स्वार्थमा विलिन भएको छ । आन्दोलन आज जेठ २ गते विहिबारबाट समाप्त भएको छ । जनताको समस्यालाई नारालाई बजाएर राजनीति गरिराख्न नेताहरुलाई थप बल पुगेको छ । काठमाण्डौलाई हेटौडासंग जोडने सबैभन्दा छोटो मार्ग कान्तिलोकपथको मुख्ख विन्दु सातदोवाटोबाट चापागाउँसम्मको सडकको दुरावस्थाले यहाँका स्थानीयहरुलाई मात्रै हैन । सिङ्गो देशलाई नै सताएको छ ।
निकै दहनीय अवस्था रहेको सातदोबाटो चापागाउँ सडकखण्डमा कालोपत्रे गर्न माग राख्दै जनताले सुरुवात गरेको बन्दमाथि नेताहरुको राजनीतिले जीत हासिल गरेको छ । जनताले जे माग गरेर आन्दोलन गरेका हुन् त्यो प्राप्त हुने सम्भावना निकै पर धकेलिएको छ ।
नेताहरुको अग्रसरतामा भएको सम्झौताअनुसार आगामी कार्तिकसम्ममा कालोपत्रे गरिसक्ने सहमति भएको छ । सम्झौता पत्रमा ललितपुर क्षेत्र नं. ३ की प्रतिनिधिसभा सदस्य, ललितपुर क्षेत्र नं ३ को क प्रदेशसभाका सदस्य, गोदावरी नगरपालिकाका मेयर र जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका उपप्रमुख, नेकपा, नेपाली काँग्रेसका एक÷एक जना प्रतिनिधि र गोदवारी नगरपालिका वडा नं. ११ का अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् । विहिबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफल अनुसार मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर असोज कार्तिकसम्म कालोपत्रे गर्ने उल्लेख छ ।
यो सम्झौतासंगै आन्दोलन फिर्ता गर्न गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले आग्रह गरेका छन । सडक विभागमा आज भएको छलफलमा आगामी कात्तिकसम्म जसरी पनि कालोपत्रे गर्ने सहमति छ ।
त्यसका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लाने सहमति छ । हाल जे जस्तो अवस्था छ त्यही अवस्थामा कालोपत्रे गर्ने सहमति भएको सहमति पत्रमा उल्लेख छ । अब सडक विस्तार नगर्ने र विस्तारित सडकको स्तरउन्नति मात्रै गरिने समेत सहमति पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रीपरिषदबाट रकम विनियोजित भएको खण्डमा अहिले ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीले नै सडक कालोपत्रे गर्नेछन् । तर मापदण्ड अनुसार भने होइन, अहिले जे जस्तो अवस्थामा छ, त्यही अनुसार नै पिच हुनेछ ।
यसअघि पनि छारो धुलो उडेको भन्दै जनताले नगरपालिकामा दबाब दिएका थिए । त्यसलगातै मेयर गजेन्द्र महर्जनले आश्वासन दिएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको थियो । करिव ३ वर्ष भन्दा अगाडिदेखि नै दुरावस्था रहेको सडकको तत्कालै पिच हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेका स्थानीयलाई कात्तिकसम्मको म्याद राखेर आँखामा छारो हालिएको छ ।
सडक तत्कालै पिच गराउने वतावरण वनाउन नसक्ने जनप्रतिनिधिहरुले एउटा सम्झौताको भरमा ७ महिनासम्म धुलोधुँवामा नै रुमल्लिनु पर्ने अवस्था सृजना गरिदिएका छन् । कार्तिकमा पनि यो सडक पिच हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भने छैन, पटकपटक आश्वासन बाँडेर राजनीति गर्न सिपालु जनप्रतिनिधि र स्वार्थ सिद्ध पार्न आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने कार्यकर्ताका कारण जनदबाब पनि स्खलित हुन्छ भन्ने ज्वालन्त उदाहरण वनेको छ चपागाउँ सडकको वर्तमान आन्दोलन । तथापि समस्याको समाधान आन्दोलन मात्रै हैन । तर नेपालमा आन्दोलन नै नगरी केही पनि हुने अवस्था छैन । भ्रष्ट्राचार, कार्यकुशलता विहिन कर्मचारी र चाकडीबाद नेताहरुकै कारण यो अवस्था रहीरहेको हो भन्दा फरक नपर्ला । अहिलेको सम्झौताले सार्थकता पाओस् । फेरी पनि जनता सडकमा आउन नपरोस् । चापागाउँ सातदोबाटो सडकले समेत पाओस् पटकपटक छारो धुलोबाट मुक्तिका लागि जनता सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नहोस ।
असोज १० देखि १७ गतेसम्म नयाँ नोट साटिने
नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज १० देखि १७ गतेसम्म नयाँ नोट साटिने जनाएको छ।
दाजुलाई खुकुरी प्रहार गरेर भाइले आत्महत्या गरे
द व्हाइट जोन क्यालिफोर्निया च्याप्टरमा नयाँ नेतृत्व
जितिया पर्वको उपवास बसेकि वृद्धाको मृत्यु
NRNA:एनसीसी निदरल्यण्ड उपाध्यक्ष नायीका बर्षा खड्का युरोप क्षेत्रको महिला संयोजक उम्मेद्वार
गैरआवासीय नेपाली संघको पहिलो नेपाली स्वास्थ्य सम्मेलन सम्पन्न
वडा कार्यालयमा आगलागी
अरिङ्गालले टोकेर बालकको मृत्यु
घरमा खानाखाना आएका व्यक्तिद्वारा अपाङ्गता भएकी युवती बलात्कृत
सामुहिक बलात्कार आरोपमा ४ जना पक्राउ
बाढीले बगाउदा दुई बालिका बेपत्ता
बास्केटबल खेल्दैगर्दा हृदयघात भएर एक युवकको मृत्यु
भक्तपुरको कपास उद्योगमा आगलागी
NRNA:एशिया प्रशान्त क्षेत्रका आरसी किरण थापा उपाध्यक्षमा उम्मेद्वार हुने
चाडपर्वमा भारतबाट नेपाल फर्कनेलाइ शिमा क्षेत्रमा सहज बनाइने
आन्दोलनरत विद्यार्थी र चितवन मेडिकल कलेजबीच सहमति
आजबाट लामो दूरीमा चल्ने बसको टिकट बुकिङ सुरु
७६ कैदीबन्दी एकसाथ बिरामी
Registration of Delegates from Canada for 9th Global Conference in Nepal
उद्घाटन गरेको ११ महिना बितिसक्दापनि सञ्चालनमा आएन विद्युतीय बस
विद्यार्थीबाट बढी असुलेको शुल्क ३० दिनभित्रै फिर्ता गर्नेगरि ५ बुँदे सहमति
NRNA:एनसीसी यूकेको अध्यक्षमा पुनम गुरुङ विजयी, होम कन्ट्रीमा नै कुल आचार्य कमजोर
NRNA अमेरिका:डेलिगेट्स छनोट गरेको हो कि आफैं अभिष्टको तराजुमा जोखिएको?
संविधान दिवस र यसको कार्यान्वयन सम्बन्धि केहि भन्न मन लागेका कुरा!
मदिराको नशामा ७० वर्षीया बृद्दालाई बलात्कार गरि फरार अभियुक्त पक्राउ
निवेदन दिएको एक बर्ष बित्दा नि जीवन बिमाको रकम दिएन प्राईम लाईफले
हत्या भएको १५ दिनपछि सेप्टिनक ट्यांकीमा भेटियो शव∶सेनाका हवल्दार पक्राउ
कपडा पेल्ने मेसिन पड्किँदा भारतीय नागरिकको मृत्यु
क्यान्सरबाट वडाध्यक्षको निधन
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०मा पटिहानीको अम्ब्रेला स्ट्रिट सञ्चालनमा आउने
श्रीमानको हत्या अभियोगमा श्रीमतीसहित दुई जना पक्राउ
सभामुख महरा ६ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्वगर्दै कजाकस्तान प्रस्थान
जितिया पर्वको व्रत आजदेखि शुरु
NRNA:काठमाण्डौमा अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेर कोरिया पुगे उपाध्यक्ष पन्त
गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर ४ रेक्टरस्केलको भूकम्प गयो
हिमाल आरोहणमा जाने सम्पर्क अधिकृतलाई सरकारले तालिम दिने
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ दशैंपछि नेपाल आउने
NRNA:सचिव जानकी गुरुङ महासचिवकै उम्मेद्वार पक्का, नेपाल पुगेर अष्ट्रेलिया जाने तरखर
क्यानडाको संसद भवनमा नेपालीले नेपाल डे मनाए, नेपाल भ्रमण गर्न निम्तो दिए
NRNA:आइसीसी सदस्य अभिमन्यू बस्नेत अमेरिकाज क्षेत्रको क्षेत्रीय उपसंयोजकमा उम्मेद्वार हुने
पशुपति मन्दिर क्षेत्रभित्र भेटिएको बम नेपाली सेनाले निस्क्रिय पार्यो